Madaxweynaha Soomaaliya oo cambaareeyay weerarkii ka dhacay Mandera – Radio Muqdisho
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa cambaareeyay weerarkii kooxda Al-Shabaab ay u geysteen dad ka shaqeynayay god kaawada laga qodo oo qiyaastii magaalada Mandera u jirta 15 Km.
War-saxaafadeed ka soo baxya xafiiska Madaxweynaha ayaa lagu sheegay in isaga oo ku hadlaya magaca dowladda Federaalka ah iyo kan shacabka Soomaaliyeed uu ka tacsiyaynayo dhacdadii kooxda Al-Shabaab saakay ay ka geysteen meel u dhaw magaalada Mandera, halkaasi oo ay ku dileen 36 shaqaale ah.
Madaxweynaha ayaa yiri “Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya waxa ay ka mideysanyihiin cambaareynta falkii ay geysteen kooxda Al-Shabaab, waxaana ay isku garabsanayaan la dagaalanka haraadiga argagixisada dhibta ku haya shacabka labada wadan, ciidamada sirdoonka Soomaaliya oo kaashanaya dhigooda Kenya waxa ay xoogga saarayaan sidii gacanta loogu dhigi lahaa shaqsiyaadkii ka dambeeyay falkaasi”.
Madaxweynaha oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri “Waan ogsoonahay sirta ay maleegayaan Al-shabaab, kuma dhaceyno shabaqooda, waxay isku dayayaan inay qalalaaso ka dhex dhaliyaan deganaanshiyaha labada dal, balse waa in aan u sheegnaa in ay taasi ku qaldanyihiin, waana in aan sameynaa fal kasta oo lagu soo qaban karo dadkii falkaasi ka dambeeyay, si aan ula tiigsano cadaaladda”.
Ugu dambeyntii Madaxweyne Xasan ayaa yiri “Waa in aan iska ilaalinaa falalka ay maleegayaan kooxda Al-Shabaab, oo gabalkooda sii dhacay, isla markaana aan awood ku lahayn goobaha dagaalka marka ay ciidamada ka horyimaadaan, waana in aan isdajino, oo cabirno, isla markaana aan bartilmaameedsano jawaab celinteena ku aadan arrintaasi, waan in aan isku duubnaanaa oo aan ogaanaa in aan leenahay hal cadow, kaasi oo ah Al-Shabaab”.
Uhuru Kenyatta"Waa in aan Ku Guuleysanaa Dagaalka Ka Dhanka ah Argagixisada"